Wasiirka Khaarajiga Oo u Kicitimay Dalka Kenya Iyo Qodobo Somaliland kala hadlayso UN-ka | Salaan Media
Wasiirka Khaarajiga Oo u Kicitimay Dalka Kenya Iyo Qodobo Somaliland kala hadlayso UN-ka
“Mucaawinadda ay bixiso QM waa in aanay waxyeelo u gaysan qaranimadda iyo xoriyadda Somaliland”
“Waxaanan Warqad Mowqifka Somaliland ka Turjumaysa aanu u Gudbinaynaa Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa”
“Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysaa waa inay dhawrtaa Baratakoolkii ay ku wada shaqayn Jireen Somaliland”
Hargeysa (SM)-Wasiirka Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar, ayaa sheegay inay qarramadda Midoobay kala xaajoonayaan gaabis iyo isbedel ku yimid qaar ka mid ah Ha’yadaha UN-ka ee ka hawl-gala dalka.
Wasiirka Khaarajigu waxa uu sidaasi ka sheegay mar uu maanta ka dhoofayay madaarka Berbera isagoo u kicitimay dalka Kenya, waxaanay Saxaafadu su’aalo ka weydiisay dulucda socdaalkiisa.
Wasiirka oo ugu horayn la weydiiyay sida uu u arko wada shaqaynta Somaliland iyo Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxa uu yidhi “Marka Loo eego xidhiidhka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa Dawladda Somaliland iyo ha’yaddaha Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa wuu wanaagsan yahay, hase yeeshee waxa imika jira oo soo baxaya oo aanu arkaynaa meelo u baahan in la hagaajiyo.”
Wasiir Maxamed Cabdilaahi waxa uu tilmaamay inay qarramadda midoobay uga fadhiyaan inay dhawraan baratakoolka loo wada shaqeeyo, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Ha’yadaha qaranku waxay ka cabanayaan Ha’yado ka mid ah jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo wada shaqayntii ay la lahaayeen dalka uu gaabis iyo isbedel ka jiro meelaha qaarkood.
waxaanu jecelahay inaanu qarramadda midoobay arrintaasi kala hadalno oo aanu ugu baaqno in loo baahan yahay in arrimahaasi dib loo eego. Somaliland muddo dheer ayay la macaamilaysay Ha’yadaha qarramadda midoobay, waxaana jiray baratakoolo iyo hab lagu shaqeeyo oo ka dhaxeeyay labadooda. Waxaanu doonaynaa in baratakoolkaasi la dhawro oo aan lagu xad-gudbin.”
Wasiirku wuxuu intaas ku ladhay “Mucaawinadda ay bixiso jimciyadda quruumaha ka dhaxaysaana waa in aanay waxyeelo u gaysan qaranimadda iyo xoriyadda Somaliland. Waanu ognahay inaanay Somaliland qarramadda midoobay ku lahayn kursi, laakiin xurmo iyo sharaf baa ka dhaxaysay muddo dheer.”
“Waxaanu doonaynaa in dawladda Somaliland lagala tashado isbedeladda ku imanaya jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa. Tusaale ahaan arrintii maamulka hawadda waxaanu u aragnaa iyadoo aan Somaliland lagala tashan xafiiska UNDP ee qarrammadda Midoobay uu si baal-marsan nidaamka dawliga ah iyo nidaamkii aanu hore ugu wada shaqayn jirnay inuu maamulka hawadda ku wareejiyay dawladda Soomaaliya ee Muqdisho.
Arrintaas ma ogolin waanan ka hadalnay, waxaanan warqad mowqifka dawladda Somaliland ka turjumaysa aanu u gudbinaynaa Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland.